Gini mere na ụlọ ọrụ gị etinyebeghị n'ọrụ CMS? | Martech Zone
Gini mere na ụlọ ọrụ gị etinyebeghị n'ọrụ CMS?
Enwere otutu mkparịta ụka na blọọgụ a gbasara njikarịcha, njikarịcha ntụgharị, ahịa inbound, njikarịcha ọchụchọ… ọbụlagodi nyocha ọtụtụ na ọdịda peeji nke njikarịcha. Mgbe ụfọdụ anyị na-echefu na ọtụtụ saịtị ka dị na 1990 ma ọ bụ peeji HTML siri ike na-anọdụ na-agbanweghi na sava!
M banyere site na FTP, budata faịlụ ahụ ma mee ndezi ndị dị mkpa site na Dreamweaver. M gwaziri ha na ọrụ a niile enweghị isi. Onye ahịa ọzọ na-adịbeghị anya ezigala ahịa ha na ọzụzụ HTML ka ha wee nwee ike imelite saịtị ha. Nke a bụkwa ihe na-enweghị isi. Ọ bụ ezie na ihe ọmụma nke teknụzụ weebụ na-enye aka, usoro nchịkwa ọdịnaya dị mma nwere ike inye ụlọ ọrụ gị ngwaọrụ niile dị mkpa iji mee ka saịtị gị dị ọhụrụ kwa ụbọchị mgbe ị na-ewepụ ihe mgbochi agụmakwụkwọ na teknụzụ.
Maka ụgwọ nke klaasị ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ na-aga n'ihu na onye weghaara weebụ, ụlọ ọrụ ndị a nwere ike mejuputa usoro njikwa ọdịnaya siri ike ha nwere ike ijikwa.
Maka otu onye ahịa dị otú a, Akwụkwọ-Lite, a onye na-eweta usoro nhazi akwukwo, anyị jiri WordPress. E nwere ọtụtụ ihe ngwọta ọdịnaya nwere ike dị na ahịa ahụ, mana nke a nwere mgbịrịgba na mkpịsị ụkwụ niile ma dị mfe mgbanwe maka ihe ndị ahịa chọrọ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngalaba ọ bụla na-edeba aha ugbu a na-enye usoro njikwa ọdịnaya nke ha ma ọ bụ nwee ntinye aka nke usoro njikwa ọdịnaya ndị ọzọ. Naanị ndụmọdụ m ga-abụ ịrapara na ikpo okwu nke nwere nnabata doro anya na nnukwu obodo mmepe ya.
Buru n'uche na ịwụnye CMS n'efu abụghị n'efu, n'agbanyeghị. Mmezi nkwalite bụ kwesịrị! Beingbụ nnukwu nwa na ụlọ ọrụ CMS n'efu na-enyefekwa ndị omempụ ndị ọzọ na-anwa mbanye anataghị ikike gị n'elu ikpo okwu. CMS a na-akwụ ụgwọ na ntanetị nke dị ọnụ ala agaghị enwe ike iguzogide ọtụtụ okporo ụzọ - chọrọ ka ị mee dozie akụrụngwa gị.
Uru ndị dị na ya karịrị ihe ọghọm ma ọ bụrụ na ị nwere ezigbo aka-nwoke iji debe CMS gị ahụike, n'agbanyeghị. Yana itinye na ichikota CMS:
Anyị mere ụfọdụ-ọgwụgwụ njikarịcha maka engines ọchụchọ nwere ngwa mgbakwunye ziri ezi na nhazi usoro.
We ahaziri nbanye nbanye ya mere ndị ahịa ha nwere ike nbanye ma hụ ọdịnaya amachibidoro.
Anyị ahazi ma gbanwee ya see okwu plugin bugharia ahịa ruturu na peeji nke peeji nke.
Anyị zụtara ma wụnye a ụdị ọgwụgwọ siri ike ya mere ha nwere ike ijide inbound ahịa na-eduga.
Anyị emelitere faịlụ htaccess iji weghachite njikọ ochie na ụzọ ọhụrụ na otu ọdịnaya. Anyị wụnyekwara a redirection ngwa mgbakwunye iji mee ihe ndị ọzọ chọrọ chọrọ. Nke a na-abụkarị nzọụkwụ a na-elegharaghị anya site na ndị na-emepụta weebụ ma nwee ike igbu njikarịcha gị. Jide n'aka na njikọ ndị ochie gị ka na-arụ ọrụ point naanị tụọ ha na ọdịnaya ọhụrụ!
Anyị tinyere isiokwu na plugins ka saịtị wee na-arụ ọrụ zuru oke iphone, iPod touch na ngwaọrụ mkpanaka ndị ọzọ. Ndị mmadụ na-tinye n'ọrụ mobile ngwaọrụ ịgagharị na saịtị ọzọ na ndị ọzọ… bụ gị na saịtị nke ogugu na ngwaọrụ ndị a?
Anyị ahazi achicha na ngalaba nke saịtị na miri emi igodo otú ahịa nwere ike ịnyagharịa mfe.
N'ezie, anyị hazie Webmasters, Stats plugins, na Analytics ka ụlọ ọrụ wee nyochaa okporo ụzọ ya.
Ikekwe nke kachasị mkpa, anyị na-aga n'ihu na-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka ịbanye na ikpo okwu ọhụrụ ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma. A CMS dị ka WordPress nwere ike ịbụ ntakịrị ụjọ na mbụ. Enwere m ike ijide gị na ọ dị mfe karịa ịkọwa FTP na HTML, agbanyeghị!
N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na WordPress bụ ezigbo ihe ntanetị, m kwenyere n'eziokwu na ọ bụ usoro njikwa ọdịnaya weebụsaịtị kachasị mma. Enwere ngwanrọ dị ka azịza ọrụ dị ka Uzo ahia nke na-enye njikwa saịtị, ịde blọgụ, na ọbụna ecommerce.
Tags: CMSọdịnaya managementusoro njikwa ọdịnayacontent Marketing
Branddị gị kwesịrị ịdị na Social Media
Ọkt 21, 2009 na 12:42 AM
E kwuru nke ọma, Doug.
Mgbe enwerela m ahụmịhe yiri nke a na ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-eme ya otu esi eme ya na narị afọ gara aga, nke a bụkwa eziokwu:
"CMS dị ka WordPress nwere ike ịbụ ntakịrị ụjọ na mbụ."
Ndị nwere obere azụmaahịa, ọkachasị, chọta CMS oke ọrụ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga - echeta ma ọ bụrụ na ị na - arụ ọrụ gị ma tinye ihe ọhụụ ọhụụ ọ bụla. Site na oge ị ga-eji CMS ọzọ, ị chefuola otu esi eme ya. Na onye chọrọ ịgụ akwụkwọ ntuziaka?
WordPress dị ezigbo mma karịa Joomla ma ọ bụ Drupal n'ihe gbasara njikwa ọrụ izugbe. Na workflow bụ ihe kensinammuo tụnyere ndị ọzọ abụọ.
Kedu ihe bụ ahụmịhe gị na CMS maka obere ndị nwe ụlọ ahịa? You nwara ndị ọzọ “dị mfe”?